Bogga ugu weyn » Wararka Safarka » Bandhigyada 'Rhapsody of the Bases' ee Singapore
Bandhigyada 'Rhapsody of the Bases' ee Singapore
SINGAPORE (TVLW) - Summad dalxiis oo caalami ah oo saldhigeedu yahay reer Galbeedka ayaa si weyn ugu soo kordhaysa suuqa Aasiya.
Mid ka mid ah hawl wadeenada dalxiiska ee ugu waawayn Mareykanka iyo Yurub - Royal Caribbean International - wuxuu sameeyay kulankiisii ​​ugu horreeyay ee Aasiya iyo Baasifiga markii uu yimid 'Rhapsody of Seas' oo ku yaal Singapore Axaddii, isagoo siday ilaa 2,000 oo dalxiisayaal ah oo ka kala yimid Australia iyo New Zealand.
Markabku wuxuu Singapore ugu yeerayaa guriga labada bilood ee soo socota ka hor inta uusan u wicin dekedaha Hong Kong, Shanghai, Japan iyo South Korea.
Rama Rebbapragada, Agaasimaha Asia-Pacific ee Royal Caribbean Cruises, wuxuu yiri: "Waxaan u dooranay Singapore labo arimood - inay noqoto hoygayaga 'Rhapsody of the Seas' barnaamijkeena Aasiya ee aan ka bixinno gobolka Koonfur-bari, iyo sidoo kale xarunteena guud. Singapore wax badan ayaa laga helaa. Jinsiyadaha badankood waxay jecel yihiin inay halkan yimaadaan oo ay booqdaan. ”
Sanadkii la soo dhaafay, 850,000 oo rakaab ah ayaa ka soo raacay Singapore iyagoo ka soo kicitimay sida Indonesia, India, Australia, New Zealand, Malaysia iyo Europe.
Tirada rakaabka dalxiiska ee Aasiya Baasifig ayaa sidoo kale la filayaa inay koraan in ka badan 40 boqolkiiba min 1.07 milyan sanadkii 2005 ilaa 1.5 milyan sanadka 2010 iyo 2 milyan sanadka 2015.
Imaatinka 'Rhapsody', oo leh adeegyadeeda cusub ee dusha sare iyo barnaamijyada fasaxa ee abaalmarinta lagu abaalmariyo oo ay ku jiraan fuulitaanka dhagaxa, ayaa lagu wadaa inuu sare u qaado dalxiiska gobolka.
Lim Neo Chian, Ku-Xigeenka & Agaasimaha Guud ee Golaha Dalxiiska ee Singapore (STB), ayaa yiri: “Anaga ahaan, waxaa naga go’an inaan kobcino ganacsiga dalxiiska Aasiya. Marka runtii waa ballanqaad la muujiyey Aasiya. Waxaan la shaqeyn doonaa iyaga si aan halkan uga helno maraakiib badan oo dalxiis ah halkaan qeybteenna ka mid ah iyo inaan siinno fursado dalxiis oo dheeraad ah booqdayaashayada ku sugan Singapore. ”
Awoodda in ka badan 2,400 oo rakaab ah iyo 78,000 tan, 'Rhapsody' waa markabka ugu weyn ee hoy u noqda Aasiya.
Oo leh 11 deked, waxay sidoo kale ka mid tahay kuwa ugu dhaadheer.
Xaqiiqdii, markabku waa mid aad u dheer oo uusan ku xirin karin xarunta loo yaqaan 'Singapore Cruise Center' ee Harbourfront cabsi laga qabo inuu ku dhex dhaco gawaarida fiilooyinka.
Taabadalkeed, waa inay ku soo xidhato Terminal-ka Pasir Panjang, kaas oo u jira xoogaa 15 daqiiqo oo ah tababaraha meel ka fog Harbourfront.
Imaatinka 'Rhapsody' wuxuu muujinayaa baahida loo qabo Terminal cusub oo weyn oo loogu talagalay warshadaha dalxiiska si ay u koraan, STB-na waxay rumeysan tahay in Terminal-ka cusub ee Marina South la soo bandhigi karo uu shaqada bilaabi karo sanadka soo socda.
“Marka laga hadlayo xarunta, asal ahaan waxaa jira laba arrimood hadda - mid ayaa ah in maraakiibta waaweyn ay waxoogaa dhibaato ah ka haysato imaatinka xarunta dalxiiska; tan labaad waa sababta oo ah baahida sii kordheysa ee ganacsiga dalxiiska, Xarunta Cruise Center ee hada waxaa ku yara yaraada ciriiri mararka qaarkood. Marka asal ahaan waa inaan dhisnaa xarumo cusub. Waxaan eegnay Marina South waxaanan si firfircoon ula shaqeyneynaa dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda. Waxaan rajeyneynaa inaan awoodno inaan bilowno shaqada sanadka soo socda, ”ayuu yiri Mr Lim, oo rajo wanaagsan ka muujiyay in tareenka cusub ee laga raaco Marina South uu diyaar noqon doono labo ilaa seddex sano ka dib.
In kasta oo 'Rhapsody of the Seas' ay ka soo guureyso Singapore wixii ka dambeeyay Janaayo, Jasiiradda Royal Caribbean waxay geynaysaa markab kale - 'Legend of the Sea' - Singapore dhamaadka sanadka soo socda.
'Legend' waa nooc la mid ah 'Rhapsody', laakiin wuu ka gaaban yahay waana inuu awoodaa inuu ku xirto Xarunta Dalxiiska ee Singapore.